Madaxwaynaha DDSI oo maanta xadhiga ka Jaray 2 buundo oo laga hirgaliyay xarunta deegaanka ee jigjiga Booqdayna Mashaariico Kale. - Cakaara News
Madaxwaynaha DDSI oo maanta xadhiga ka Jaray 2 buundo oo laga hirgaliyay xarunta deegaanka ee jigjiga Booqdayna Mashaariico Kale.
Jigjiga(CN) Khamiis Sept.04.2014. Ka hor bixitaankii addis-ababa ayaa ay Madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo ay wehelinayaan afhayeenka golaha baarlamaanka DDSI ahna gudoomiyaha XDSHSI mudane Maxamed Rashiid Isaaq,mayorka Maamulka magaalada jijiga ahna komoshineerka Booliska DDSI mudane c/risaaq saxane iyo masuuliyiin kale ayaa waxa uu maanta xadhiga ka jaray 2 buundo oo laga hirgaliyay Magaalada Jigjiga.
Bundooyinkan laga hirgaliyay caasimada deegaanka ee jigjiga oo ah kuwa dadwaynaha iyo ardayda ayaa waxay ka mid yihiin mashaariicaha horumarineed ee sida dhakhsaha badan loo hirgaliyay sanadkii tegay waxaana 2dan buundo laga dhisay goobaha iskuulada horteeda ah ee ku yaala wadada laamiga ah ee badhtamaha magaalada jigjiga sida Dugsiga sare ee Sheekh C/salaan iyo Dugsiga sare ee Wiilwaal si ay ardaydu uga badbaadaan shilalka kaga iman kara maritaanka wadada oo ay baabuurtu ku badan yihiin.
Munaasabada xadhig jarka ka badib waxa ay madaxwaynaha, Afhayeenka iyo masuuliyiintii kale soo indha indheeyeen dhismaha hoolka wayn ee shirarka loogutalo galay kaasoo laga hirgaliyay magaalada jigjiga gaar ahaan dhinaca garab-case ee wadada u baxda Qabribayax.
Hoolkan ayaa ah mid si casri ah loo dhisay kana kooban qaybo badan laguna qiyaasay in uu qaadi karo dad ka badan 2500 ayaa la soo gabagabeeyay dhismihiisii una taagan in xadhiga laga jaro si uu u qabto adeegii loogu talogalay.